Iimvo zeMarian Wright Edelman: Ukukhuthaza abantwana
UMarian Wright Edelman (1939 -)
UMarian Wright Edelman , umsunguli kunye noMongameli weNgxowa-mali yoKhuselo lwaBantwana, wayengowokuqala waseMerika waseMelika ovunyelwe ukuba angene kwi-bar yelizwe lase-Mississippi. UMary Wright u-Edelman uye wapapasha izimvo zakhe kwiincwadi ezininzi. Ukulingana Kwempumelelo Yethu: Incwadi Kubantwana Bakho Neyakho yayiphumelele. Ukubandakanyeka kukaHillary Clinton kunye neNgxowa-mali yoKhuselo lwaBantwana banceda ukunikela ingqalelo kwintlangano.
Ekhethiweyo i-Marian Wright Edelman Iikopi
• Inkonzo yerenti esiyihlawulayo yokuhlala. Yona yinjongo yobomi kwaye akukho nto uyenzayo ngexesha lakho lokuzimela.
• Ukuba awuyithandi indlela yehlabathi, uyitshintsha. Unembopheleleko yokuyitshintsha. Uyenza nje inyathelo elinye ngexesha.
• Ukuba asiyi kumela abantwana, ngoko asiyikuma.
• Ndikwenza oko ndicinga ukuba ndibekwe kulo mhlaba ukwenza. Kwaye ndinombulelo gqitha ukuba ndinento endiyithandayo kwaye ndicinga ukuba ibaluleke kakhulu.
• Unokutshintsha ngokwenene ihlabathi ukuba unomdla okwaneleyo.
• Inkonzo yintoni ubomi obukuyo.
• Xa ndilwa malunga nento eyenzekayo kummandla, okanye xa ndilwa malunga nento eyenzekayo kwabanye abantwana, ndenza oko kuba ndifuna ukushiya uluntu kunye nehlabathi elibhetele kunelo ndifumene.
• Ukungakwazi ukufumana unyango lwezempilo ngenxa yokuba abantu abangenayo i-inshurensi, bayabulala, bangabonakali kakhulu, kwaye babonakali kakhulu kunobuglobongela, kodwa umphumo uyafana.
Kwaye izindlu ezihluphekileyo kunye nemfundo embi kunye nomvuzo ophantsi ubulala umoya kunye namandla kunye nomgangatho wobomi sonke esifanelekileyo. - 2001
• Ilifa endifuna ukuyishiya yinkqubo yokukhathalela abantwana ithi akukho ntswana eya kushiyelwa yedwa okanye ishiywe ingaphephile.
• Abantwana abavotanga kodwa abantu abadala abakwenzayo kufuneka bavuke baze bavote.
• Abantu abangavotayo abanalo umgca wekhredithi kunye nabantu abakhethiweyo kwaye ngaloo ndlela bangabi nengozi kulabo abenza izinto ezinxamnye neminqweno yethu.
• Umngeni wobulungisa bezenhlalakahle ukukhupha umqondo wendawo esiyidingayo ukwenza ukuba isizwe sethu sibe indawo engcono, njengoko senza indawo ekhuselekileyo. - 2001
• Ukuba sicinga ukuba sinayo kwaye asikweleta naliphi na ixesha okanye imali okanye umzamo wokunceda abo bashiye ngasemva, ngoko siyingxenye yengxaki kunokuba isisombululo kwisithenjwa sentlalo esitshatyalaliswayo esongela bonke abaseMerika.
• Ungaze usebenze nje ngemali okanye ngamandla. Abayi kusindisa umphefumlo wakho okanye kukunceda ulale ebusuku.
• Andikhathalele oko abantwana bam ukhetha ukwenza ngokusemthethweni, ngokukhawuleza nje phakathi kokukhetha kwabo baqonda ukuba kufuneka banike into ethile.
• Ukuba wena njengabazali unqamle ingqungquthela, abantwana bakho nabo baya kuba. Ukuba uthe waxoka, baya kuba. Ukuba uchitha yonke imali yakho kunye neyeshumi, akukho nxalenye yayo yokuncedisa, iikholeji, iicawa, iesikhungu, kunye neengxaki zomphakathi, abantwana bakho abayi kuba. Yaye ukuba ngaba abazali bexhaphaza ngokobuhlanga kunye neentlobano zesini, esinye isizukulwana siya kudlula abantu abadala abanobutyhafu abazange babe nesibindi sokucima.
• Ukucamngca abanye kuya kuthatha wena kunye nabantwana bakho phambili ebomini kunanaliphi iikholeji okanye i-degree degree.
• Awunyanzelekile ukuphumelela. Unyanzelekile ukuba uqhubeke uzama ukwenza okusemandleni akho nsuku zonke.
• Akufuneki ukuba, xa sizama ukucinga ngendlela esinokuyenza ngayo umahluko omkhulu, singayihoyi ulwahlulo oluncinci lwemihla esingayenzayo, ekuhambeni kwexesha, engeza kwiiyantlukwano ezinkulu apho sihlala singakwazi ukuzibona.
• Nabani na othe umntu unelungelo lokuyeka?
• Akukho mntu unelungelo lokunisela amaphupha akho.
• Ukholo lwam lube yinto ehamba phambili yobomi bam. Ndiyicinga ukuba kubalulekile ukuba abantu ababonwa njengenkululeko abayikwesaba ukuthetha malunga nokuziphatha nokuziphatha kwabantu.
• Xa uYesu Kristu ecela abantwana abancinci ukuba baze kuye, akazange athi kuphela abantwana abacebileyo, okanye abantwana abamhlophe, okanye abantwana abaneentsapho ezimbini zomzali, okanye abantwana abangenakho ukukhubazeka kwengqondo okanye ngokomzimba. Wathi, "Maye bonke abantwana mabaze kum."
• Ungaziva unelungelo kunoma yini ongayifumaniyo kwaye uyilwela.
• ekunakekelweni kwabantwana: mna onayo yonke into exhomekeke kuyo ngeeminwe zam. Andiyazi ukuba abafazi abahluphekileyo bayaphatha njani. - udliwano - ndlebe noNks. Magazine
• Siphila kwixesha lokungaxhatshazeki okungenakubekezeleka phakathi kwesithembiso kunye nokusebenza; phakathi kwezopolitiko ezilungileyo kunye nomgaqo-nkqubo omhle; phakathi kokuzibiza kunye nezenzo zentsapho; phakathi kobuhlanga kunye nohlanga; phakathi kweefowuni zoluntu kunye noluntu oluxhaphakileyo kunye nokuhaha; kunye phakathi kwamandla ethu okuthintela nokunciphisa ukusweleka kwabantu kunye nezifo kunye nentando yethu yezopolitiko kunye yokomoya ukwenza oko.
• Umzabalazo wama-1990 ngowama-America kunye nekamva elizayo-elizayo ekumiselwe kwangoku kwimimandla kunye nengqondo kunye nemimoya yomntwana wonke waseMerika.
• Inyaniso senze intuthuko ephawulekayo kwiminyaka yama-1960 ekupheliseni indlala nokuphucula izinga lempilo yabantwana, kwaye ke sayeka ukuzama.
• I-dollar enye ngaphambili ikhusela ukuchitha imali kweedola ngaphantsi kwendlela.
• Sikulungele ukuchitha imali encinci yemali ukuba sigcine imbuzi ekhaya, ngakumbi ukuyibeka kwikhaya elincinci kunye neyona mininzi yokumisa.
• Kukho ukungabi nabantu kubantu abangazi nje ukuba sinesixinzelelo somntwana wesizwe. Kwaye kukho abantu abaninzi abafuna ukungazi kakuhle - abafuni ukwazi.
• Ukutshala imali [kubantwana] akusiyo i-luxury yelizwe okanye ukhetho lwesizwe. Kuyimfuneko yesizwe. Ukuba isiseko sendlu yakho sidibana, awuthetheli ukuba awukwazi ukukulungisa ngelixa udala izicingo zexabiso leenkwenkwezi ukuze uzikhusele ngaphandle kweentshaba.
Ingxaki asiyiyo ukuyihlawula - ngaba siya kuhlawula ngoku, phambili, okanye siya kuhlawula ngokubanzi emva koko.
• Esi sikhokelo sokuphela kwenhlalakahle njengoko siyazi ukuba ayiyi kunceda abangaphezu kwama-70 ekhulwini kwabampofu abasebenza imihla ngemihla. Iimvuzo azizange zihambisane nomlinganiselo wokunyuka kwamaxabiso kunye noshintsho kwisakhiwo soqoqosho lwethu. Kukho malunga nezigidi ezingama-38 ezihluphekayo zaseMerika, eninzi zazo zisebenza, ininzi zazo zingumhlophe. Ngoko indlela esiyidlala ngayo umcimbi wobuhlanga kule miba igcina ininzi yabantu kwimimandla yintlupheko.
• Abazali baye baba ootitshala abanolwazi ngokuqinisekileyo bayazi into ebhetele kubantwana abakulibala ukuba bona ngokwabo ngokwenene beengcali.
• Imfundo kukuphucula ubomi babanye kunye nokushiya uluntu lwakho kunye nehlabathi ngcono kunokuba ufumene.
• Imfundo yinqanaba lokusinda eMelika namhlanje.
Umbuzo: Imibutho efana noJames Dobson yokugxila kwiNtsapho iyabonisa ukuba ukunakekelwa kwengane, inhlalakahle yabantwana, yinkampani yokuqala, kodwa i-CDF ifuna ukubeka abantwana kwizandla zikaRhulumente. Uyayiphendula njani kwiintlobo zokugxeka?
Ndiyathanda ukuba bayenze umsebenzi wabo wesikolo. Ndiyathanda ukuba bafunde incwadi yam I-Measure of Our Success . Kule miba ndiyakholwa kwiintsapho ngaphezu kwazo zonke. Ndikholelwa kubazali. Ndikholelwa ukuba abaninzi abazali baya kwenza umsebenzi ongcono. Ku-CDF sisoloko sithetha into ebaluleke kakhulu esinokuyenza kukuba inkxaso kubazali kunye nabazali. Kodwa ininzi yemigaqo-nkqubo kawonkewonke kunye nemigangatho yecandelo labucala yenza kube nzima kunokuba lula kubazali ukwenza umsebenzi wabo.
Ndiyakuthanda ukhetho lwabazali. Ndichasene nezinguqu kwinkqubo yenhlalakahle eya kufuna ukuba oomama baphume ukusebenza. I- interview ye-1998, i-Christian Century
• Imfundiso endala yokuba abantwana yipropati yabucala yabazali ifa kakhulu. Enyanisweni, akukho mzali ovusa umntwana kuphela. Bangaphi bethu abathandekayo besikolo sabantu abaphakathi basenokukwenza ngaphandle kokunciphisa imali? Le yinkxaso karhulumente yeentsapho, kodwa asifuni ukubeka imali ngqo kwizindlu zoluntu. Sithatha inzuzo yethu kuxhomekeke kulondolozo lwabantu abaxhomekeke kuncikelele kodwa singacingi ukubeka imali ngqo ekunakekeleni abantwana. Ukuqonda kunye nokufuneka kuqala ukuphazamisa iingcamango zangaphambili zobomi bentsapho bodwa, kuba ezininzi iintsapho zisezinkingeni. Ingxoxo ye-1993, i-Psychology Today
• Ihlabathi langaphandle lixelela abantwana abamnyama xa ndikhula ukuba asifanelekanga nantoni na. Kodwa abazali bethu bathi kwakungekho njalo, kwaye iicawa zethu kunye nabafundisi bethu bathi kwakungekho njalo. Bakholelwa kuthi, kwaye ke, ngoko, sikholelwa kuthi.
• Akukho mntu, u- Eleanor Roosevelt uthe, unokukwenza uzive ungaphantsi ngaphandle kwemvume yakho. Ungalokothi unike.
• Kufuneka nje ube ngumkhuhlane wokungabi nabulungisa. Iifostile ezaneleyo ezibetha ngokukodwa zingenza inja enkulu kakhulu ingakhathazeki kwaye iguqule ihlabathi elona likhulu.
Olongezelelweyo NgoMarian Wright Edelman
UMarian Wright Edelman Biography
IJena Jane Grey: Mfundisikazi weNtsuku ezithoba
UMacrina uMdala kunye noMacrina osemncinci
Inkcazo yeNgingqi yeModeli: Iimpawu ezine ezichazayo
10 Ukubhala Iingcamango Ngezempilo
Isikhokelo kuGeology of Valley of Fire State Park, eNevada